Nepal Dayari | पाँच बर्ष कान्छो केटासँग बिबाह गरिन जसले ढाँटेर उनिमाथी नै हाल्यो सौ’ता(भिडियो हेर्नुस)
पाँच बर्ष कान्छो केटासँग बिबाह गरिन जसले ढाँटेर उनिमाथी नै हाल्यो सौ’ता(भिडियो हेर्नुस)
माघ ३, २०७८ सोमबार १८५ पटक हेरिएको
मोरङ जिल्लाको बेलबारीको सिसौली भन्ने ठाउमा घर भएर बसोबास गर्दै आएकी अन्जिता राई नाम गरेकी एक महिला आफ्नो अशोक राई नाम गरेका श्रीमानले अर्कै केटिसग बिबाह गरेर बसेको र आफुलाइ केही पनि नबताइ फ”रा”र भएको बताउदै काखमा दुइवटा नाबालिका छोरि च्यापेर मिडियामा आएकिछिन । श्रीमानले दुई छोरी छदाछदै अर्कै बिबाह गरेको बसेको र आफुलाइ केही पनि नभनेको तर उक्त महिलाले भने अ”प”श”ब्द बोलेर फोनमा गालीगलौज गरेको गु”ना”सो गर्दै उनी मिडियामा आएकीछिन ।
यहि फाल्गुण ३ गते गते नानी जन्मिएको दुई बर्ष हुन्छ तर नानी जन्मिएको दुई बर्ष पुग्दा न पुग्दै श्रीमानले आफुलाइ छो”डेको भन्दै खुब गु”ना”सो गरिन उनले । दुइदुइ जना छोरीको जिम्मेवारी न श्रीमानको साथ छ, निकै नै ठूलो स”म”स्यामा छिन उनी । अर्काको घरमा लुगा धुइदिएर महिनाको पाच हजार कमाएर दुई छोरीहरुको पालनपोषण र घर चलाउदै आएको भन्दै धु”रु”धु”रु रु”इ”न उनी ।
आफ्नो श्रीमानसग भा”गेकी केटिले दिनैपिच्छे म्यासेज गरेर ना”ना”भा”ती बोल्न हुने नहुने शब्दहरु प्रयोग गरेर गा”ली”ग”लौ”ज गर्ने गरेको बताउछिन उनी । के सम्म चाहिँ भनेकी रहिनछिन उनले । र”ण्डी, भा”लु जस्ता तु”च्छ शब्दहरुको प्रयोग गरेर अनेक तरहका गा”ली एवम ध”म्कीसमेत दिनेगरेको बताउछिन उनी ।तैले छोरी छोरी जन्माएर म छोरा जन्माइनदिन आएको हु समेत भनेकी रहिछिन उनले ।
क”ठै छोरि जन्माउनु आफ्नो गल्ती हो र भन्दै भ”क्का”नो छा”ड्”दै रु”इ”न उनि । उनका श्रीमानले भ”गा”ए”को भनिएकी महिलासग उनी प्रत्यक्ष मिडियामै फोनमार्फत कुराकानी पनि गरिन । फोनको कुराकानीमा उनले अन्जितालाइ थ”र्का”ए”को कुरा ग”ल”त रहेको बताइन । उनै महिलाले अन्जितालाइ अशोक आफ्नो श्रीमान रहेको कुरा पनि बताएकी रहिछिन । अन्जिताले के प्रमाण छ भनी सोध्दा उल्टो अन्जितालाई नै प्रमाण माग गरिन ।
अशोककै दुइदुइजना छोरी लिएर आएकीछिन अन्जिता अनि उनैसग उक्त महिलाले भने आफू अशोकको श्रीमती हो भन्ने कुराको प्रमाण मागिन, कस्तो अ”चम्म ! श्रीमानले आफ्नो फोन ब्य”स्तमा राखेको र उनिहरुले मनलाग्दा फोन गर्ने र अनेक तरहका ध”म्की दिने गरेको बताउछिन उनी ।
क”ठै ब”रा ! नानिहरुको दु”ख सम्झेर धु”रु”धु”रु रु”इ”न उनि, नानिहरुले बाबुको निकै नै खोजी गर्ने गरेको बाटोमा हिड्ने सबैलाइ बाबू भनेर बोलाउने गरेको बताउदै डा”को छाडेर रु”इ”न उनी । श्रीमानले छो”डेर गएको एक बर्ष भैसकेको तैपनी आ”शा भने मा”रेकी छैनन उनले । आफ्नो श्रीमानलाई र उक्त महिलालाइ झि”काइदिनु भनेर बि”न्ती बि”साइन उनले मिडियाकर्मिलाइ ।